Muqdisho: Carruur dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray waxlo qarxa oo ay ku ciyaarayeen | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muqdisho: Carruur dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray waxlo qarxa oo ay...
Muqdisho: Carruur dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray waxlo qarxa oo ay ku ciyaarayeen
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, gaar ahaan Xaafadda Raadeerdka oo ay ku waxyeeloobeen carruur wada dhashay, kadib markii ay ku ciyaareen aalad qaraxda.
Qaraxa ayaa yimid, kadib carruurta ay ku ciyaareen aalad qaraxda oo ay ka heleen meel aan sidaas uga fogeyn gurigooda caruurta ayaana garaacay taas oo qaraxa dhalisay.
Hal Wiil oo sagaal sano jir ah ayaa ku geeriyooday qaraxaasi, waxaana dhaawac ka soo gaaray labo gabdhood oo la dhashay wiilkaasi, waxaana magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Macalin Aadan Maxamuud.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in Caruurta qaraxaasi Khasaaraha uu kasoo gaaray uu dhalay Macalin dugsi Qur’aan oo lagu magacaabo Aadan Maxamuud, kaasi oo dugsigiisa uu ku yaallo degmada Deyniile.
Qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhex yaalla haraadiga waxyaabaha Qarxa oo inta badan halis ku ah carruurta, maadaama maalmaha fasaxa carruurta ay ku ciyaaraan biraha waddooyinka ay ku arkaan.